onlineakhabar.com: होसियार !! मोबाइलमा कुरा गर्नासाथ यसरी आगो लाग्यो... (सिसिटिभी भिडियो)
Amazing News, Amazing World, Fire, India News, Main News, Mobile, Petrol Pump » होसियार !! मोबाइलमा कुरा गर्नासाथ यसरी आगो लाग्यो... (सिसिटिभी भिडियो)
होसियार !! मोबाइलमा कुरा गर्नासाथ यसरी आगो लाग्यो... (सिसिटिभी भिडियो)
एउटा यस्तो भिडियो जुन हेरेपछि तपाई मोबाइलमा कुरा गर्न नै डराउनुहुनेछ । यहाँ देखाइएको भिडियो पन्जाबको हो । जहाँ एउटा पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भर्ने क्रममा आगो लागेको थियो । जब आगो फैलन थाल्यो बाइकमा रहेका व्यक्ति त्यहाँबाट भागेका छन् । तर भाग्यको कुरा समयमा नै आगोलाई नियन्त्रमा लिन सकियो । अन्यथा ठूलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो ।
आखिर यस्तो घटना कसरी भयो? के कारणले त्यहाँ आगो लाग्यो भन्नेकुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर यो सिसिटिभी भिडियोमा देखिएअनुसार उक्त बाइकमा दुईजना छन् । बाइक स्टार्ट भईरहेको छ । साथै बाइकमा पछाडि बस्ने व्यक्तिले मोबाइलमा कुराकानि गरिरहेका छन् । विशेषज्ञहरुका अनुसार यो घटना मोबाइलकै कारण भएको बताउँछन् । प्राय पेट्रोल पम्पमा मोबाइलको प्रयोग नगर्नको लागि वार्निङ बोर्ड लगाइएको हुन्छ । यस्तै घटनाहरु घट्न सक्ने हुनाले यस्ता बोर्डहरु लगाइएको हुन्छ । तर हामी त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौ । हेर्नुहोस् तपाई पनि यो भिडियो ।
Tags : Amazing News Amazing World Fire India News Main News Mobile Petrol Pump